Tratran-tsarety maoderina - Fanaka - aingam-panahy
Sokajy: Trakitra vatasarihana maoderina
Mahaiza ihany koa. Manome trano ve ianao? Aza adino ny fitaovana fampiasa amin'ny endriny, izay tsy vitan'ny hoe manatanteraka asa famoronana fotsiny. Mitaky fitadiavana tratra maoderina ankehitriny. Ho an'ny sasany, ilaina amin'ny efitrano fatoriana, efitrano fandraisam-bahiny, lalantsara izy ireo fa ao amin'ny efitranon'ireo ankizy ihany koa. Fantatsika rehetra izany. Betsaka ny zavatra, toerana kely. Vata-drongony azo ampiasaina no hamahana an'ity olana ity ho an'ny fianakaviana maro. Afaka misafidy habe samihafa ianao hiantohana ny habetsahan'ny toerana fitahirizana. Ankoatry ny lafiny azo ampiharina, ny vatasarihana vatasarika dia mamaly ny fironana farany sy takian'ny mpanjifa koa.
Tratra fisarihana ho an'ny efitrano fandraisam-bahininao
29 Mey 2020 16 Febroary 2021 Admin
Akanjo iza no hisafidy ny efitrano fandraisam-bahiny? Inona avy ireo fironana lamaody farany, inona ny kojakoja tokony hofidina ho an'ny vatasarihana vatasarihana ary bebe kokoa dia hanoro anao izahay amin'ny lahatsoratra manaraka. Amin'izao fotoana izao, ilay antsoina hoe kinovan'ny vatasarihana, tratra vatasarihana misy valizy, avo sy tery, malalaka sy ambany. Tena mieritreritra ny zava-drehetra, ny mpanjifa rehetra ny mpanamboatra, ka matetika izy ireo no manandrana mampifanaraka azy ireo ary manolotra azy ireo malalaka […]
Manana olana amin'ny fisafidianana boatin-drakitra? Hanoro anao izahay!
1 martsa, 2018 16 Febroary 2021 Admin
Raha eo am-pamitana ny tranonao ianao izao ary toa tsy mbola manana toerana fitehirizana ianao, saingy tsy nitombo ny habaka, na tsy tafiditra tao amin'ny efitranonao izy io, aza kivy. Ny fitafiana dia tsy ny vahaolana tokana, na dia iray aza, azo ampiharina kokoa - tratran'ny vatasarihana. Ity fanaka kanto ity dia manatanteraka ny asany kanto ary koa ilay fampiasa. Na izany aza, […]